Ukuqothuka - Izakhiwo Nezindlu zeNW & NY, i-Selectate, Defence Defence ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Ukuqothuka
Isahluko 7 Ukuqothuka: Ukusuka ekugcwalisweni nasekugcwalisweni kwezikweletu cishe kuseduze. Inqubo ephelele yokuqothuka kwe -hluko se-7 ithatha cishe i-3 ezinyangeni ze-6. Kodwa-ke, ngokushesha nje lapho ufaka, uzoyeka okokuzenzakalelayo, ukuhlobisa, ukuphindisela, kanye necala elizokulimaza isikweletu sakho. Abanye abantu bakhathazeka ngokuqothuka kuzolimaza isikweletu sabo, noma kunjalo, kungenzeka ukwakha kabusha isikweletu sakho ngeminyaka ye-1 kuya eminyakeni ye-2 ngohlelo olunjengalo Izinyathelo ze-7 eziya kumaki esikweletu we-720.
Abanye abantu bacabanga ukuthi baphuke kakhulu ukuthi bangafayela ukuqothuka. Kodwa-ke, sinikeza ngezinhlelo zokukhokha ukuze ungadingi ukukhokha kuze kube yilapho sekufakwe ukuqothuka kwakho. Ungafaka ngisho enkantolo ukuthi kufakwe uhlelo lokukhokha.
Uma ubhekene nokudalulwa kwesahluko, ukuqothuka kwesahluko 7 kungakusiza ukumisa ukuthengiswa kwendlu yakho endalini futhi kuze kukubeke kuze kube yilapho ekugcineni kufaka Isahluko 13 ukuqothuka ukuze uhlelele ukukhokhelwa kwendlu yakho. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-a Isahluko 20 ukuqothuka.
Lokhu kuvumela okweletayo ukuthi akhiphe isikweletu sakhe esingavikelekile esahlukweni 7 ngaphambi kokukhokha izikweletu zakhe ezivikelwe esahlukweni 13 sokuqothuka.
Amanani wezitatimende nezikweletu ezingapheli emehlweni zingaba zinkulu, ikakhulukazi uma usemuva kakhulu ekukhokheni. Ukuzama ukuphina yonke imali ukuze ingatholakali akuyona indlela yokuphila. Izingcingo ezingapheli ezivela kubabolekisi zimane nje zifake ingcindezi nosizi lokungakwazi ukuqhubekela phambili. Uzamile ukwelulekwa ngesikweletu nezinye izindlela ezingokwezimali ukwehlisa umthwalo wakho wesikweletu, kepha isikweletu sisazoqongelela.
Uma usuqedile konke okukhethile, kungaba yisikhathi sokucabanga ukuphazamiseka. Ukuqothuka akufanele kube inqubo enzima, futhi akudingeki ukuthi udlule kukho wedwa. Ukufaka isicelo sommeli wokuqothuka kungasiza ekwenzeni ushintsho lube lula ngaphandle kokucindezela.
Lapho bethola indlela efanele yokuqothuka, abantu abaningi bathola ukuthi bayakwazi ukufaka ukuqothuka kweSahluko 7. Ukugcwalisa ukuqothuka kweSahluko 7 kungasiza ekuqedeni isikweletu esiningi. Kwezinye izimo, abantu bayakwazi ukususa zonke izikweletu zabo futhi baqale okusha. Ukuze unqume ukuthi iSahluko 7 iyisinqumo esifanele, kuwukuhlakanipha ukubonisana nommeli onolwazi wokuqothuka kwesahluko 7 eNew York.
Ukugcwalisa ukuqothuka kweSahluko 7 kunamandla wokukhipha zonke izikweletu ezingavikelekile ezinjengamakhadi wesikweletu, aboleke umuntu siqu, nezikweletu zezokwelapha. Kodwa-ke, ezinye izikweletu kungenzeka zingasuswa ngokuphelele noma zikhishwe, njengobambiso, iimalimboleko zabafundi, izinkokhelo zemoto, isikweletu sentela, ukuxhaswa kwezingane, kanye ne-alimony. Ukukhululwa kungasebenza, futhi abantu abafaka Isahluko 7 bangakwazi ukugcina impahla noma yonke impahla yabo, kubandakanya ikhaya labo kanye nemoto. Imithetho yezwe kanye neye-federal ivikela impahla ethile kwinqubo yokuqothuka ngokuxolelwa. Kubalulekile ukukhuluma neSahluko esinolwazi Ummeli we-7 wokuqothuka eNew Jersey ukudingida ukuxolelwa nezikweletu ezingasuswa noma zidedelwe maqondana nesimo sakho esithile.
Ihhovisi likaPatel & Soltis, LLC, lingakusiza ukuthi uzulazule futhi ufake ifayela lakho lokuQothuka, noma ngabe utholakala eJersey City, NJ; IHackensack, NJ; IFreehold, NJ; Newark, NJ; I-Brooklyn, NY; noma eNew York City, NY.
Ukugcwalisa Isahluko 7 Ukuqothuka
Kungcono ukufuna usizo lommeli wokuqothuka kweSahluko 7 eNew Jersey ukusiza ukufaka icala lakho. Izinkinga eziningi zingavela uma uthatha isinqumo sokufaka eyakho iSahluko 7 nenkantolo. Imininingwane engalungile noma elahlekile ingabambezela inqubo futhi ibe yindleko. Inkantolo ingaliphika futhi icala lakho ngokuphelele ngenxa yokushoda kwamaphepha noma izinqubo ezingalungile. Abantu abazifaka ezabo bavame ukuqasha ummeli ngemuva kokubona ukuthi inselelo futhi inqabe kanjani inqubo yezomthetho.
Ukuze ufayele eNew Jersey, okweletayo kufanele ahlangabezane nezidingo zokuba yisifundazwe. Izidingo zibuze ukuthi kungenzeka ukuthi okweletayo uhlala eNew Jersey okungenani izinsuku eziyi-180. Abanye abantu, noma kunjalo, bangavunyelwa ukufeza imfuneko yokuhlala khona ezinsukwini ezingama-91. Ngaphandle kwezidingo zokuba ngumhlali, ukuze ufaneleke iSahluko 7, umuntu oyedwa noma abashadikazi kufanele baphumelele ukuhlolwa kwezindlela. Ukuhlolwa kwezindlela kukhombisa ukuthi umuntu noma umbhangqwana oshadile uyakufanelekela ngokwezimali ukufaka ifayili leSahluko 7. Uhlolo lwezezindlela lubheka imali etholwayo uma iqhathaniswa nezinga lemali eliphakathi lombuso Uma imali engenayo ingaphansi kwephakathi, khona-ke ukufakwa kweSahluko 7 kungenzeka. Uma okweletayo angaphezulu kweleveli, angahle angafanelekeli ukufaka iSahluko 7, kodwa angakwazi ukufayela Isahluko se-13 sokufa esikhundleni salokho. Ummeli onguchwepheshe weSahluko 7 sokuqothuka eNew Jersey angasiza ekutholeni ukuthi uyakufanelekela yini ukufaka iSahluko 7.
Uma ufanele iSahluko 7 futhi icala lakho lokubhanga lifakiwe enkantolo, kuhlala kusebenza. Ukuhlala ngokuzenzakalelayo kuyenqabela abakweletisi kanye nama-ejensi wokuqoqa ekuxhumaneni nawe ngesikhathi sokuqothuka. Ngamanye amagama, abakweletisi kanye nama-ejensi wokuqoqa awakwazi ukukuthinta ukuqoqa isikweletu. Lokhu kungumculo ezindlebeni eziningi njengoba abantu ababhekene nobunzima bezezimali akudingeki babhekane nokuhlukumeza izingcingo zokuqoqwa kwezikweletu ngenkathi kubhanga. Ngaphezu kwalokho, lapho ukuqothuka kukhipha sonke isikweletu, ukuhlala ngokuzenzakalela kuba yisijeziso esiphuma unomphela. Umyalo wokudonswa unomphela uvimbela okweletwayo osikhutshiwe isikweletu sakhe kunoma yisiphi isenzo sokuqoqa leso sikweletu.
Ukuqothuka kweSahluko 7 kunganciphisa kakhulu umthwalo wakho wezezimali ngenkathi kuvinjelwa ababolekisi nabasebenza ngokuqoqa imali kuwe. Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi abafaka ku-Isahluko 7 bayakwazi ukugcina indlu yabo nezimoto zabo ngenxa yemithetho yokuxolelwa ebekwe nguhulumeni wezwe nohulumeni. Wonke amacala ahlukile, futhi indlela engcono kakhulu yokwazi ukuthi ngabe isikweletu sakho singakhishwa ukuxhumana ngokuxhumana nommeli weSahluko 7 sokuqothuka eNew Jersey ukuhlola icala lakho.
Noma ngabe useNew Jersey noma eNew York, Patel & Soltis, LLC ukhonza lezi zindawo ezilandelayo: iJersey City, NJ; IHackensack, NJ; IFreehold, NJ; Newark, NJ; I-Brooklyn, NY; I-Bronx, NY noma iNew York City, NY.
Kungani ucabanga ngokuqothuka?
Isikweletu seKhadi lesikweletu
Intela Yombuso kanye / noma Yesifundazwe
Ukuncishiswa Kumholo noma Ukulahleka KwamaJobe
Ukugula noma ukukhubazeka
Ukuzibuza nje ukuthi ngabe Kwenza Umqondo
Izincwajana zemininingwane Izincwajana zemininingwane
Khetha konke okusebenzayo
Cishe unezikweletu ezingakanani? $ 1 - $ 10,000	$ 10,001 - $ 340,000	$ 340,000 - $ 1.2 Million	$ 1.2 Million +
Amanani ahlukene wesikweletu aphathwa ngendlela ehlukile yiSahluko 7, i-11 noma i-13 yokuqothuka kwemali.
Wake wafaka imali yokuqothuka esikhathini esedlule? *
Okwamanje Yiba Necala Elivulekile Lokuqothuka
Bangaki abantu abahlala endlini yakho noma uyabaxhasa? * Mina nje	2	3	4	5	I-6 noma ngaphezulu
Uma uvame ukuthumela imali kwilungu lomndeni noma ukhokha uxhaso lwe-alimony noma ukwesekwa kwengane kungaba lula ngawe ukuthi ufanelekele ukuqothuka.
Wenza imali engakanani ngenyanga? *
Uma ushadile futhi oshade naye ehlala nawe, imali yakho yomlingani ifakiwe ekuqothulweni kwemali ukuthola ukuthi ufanelekile yini esahlukweni 7 noma uma kufanele wenze uhlelo lokukhokha ngaphansi kwesahluko 13 ukuqothuka, noma kunjalo umlingani wakho AKUFANELE fayela nawe.
Noma yiziphi ezinye izimo ongathanda ukuzihlanganyela?
I-imeyili - Ummeli uzobukeza izimpendulo zakho bese ebuyela kuwe maduze nazo zonke izinketho zakho. *
Ukuqothuka akuyona into eyodwa elingana nalo lonke uhlelo futhi kuthatha okungaphezulu kwekhasi le-automated ikhasi ukunikeza izeluleko zomthetho.